Ongoti bayathimula ngohlelomnotho lukaMengameli uRamaphosa - Bayede News
Ongoti bezepolitiki nomnotho sebekhulume ngokungahlonizi ukuthi inkulumo kaMengameli wakuleli, uMnu uCyril Ramaphosa ifana nenganekwane ukuthi uzokhanda imisebenzi eyizi-800 000 ukuzama ukwenyusa izinga lomnotho.
Lokhu bakusho izolo ntambama ngemuva kokuba uRamaphosa ethule uhlelo oluhlahlelwe lwaba yizigaba eziyisithupha lokukhuphula umnotho wezwe obonakala uzika njengoba sekunamasonto angama-31 likhahlanyezwe ukhuvethe.
URamaphosa ubeke etafuleni izigidigidi eziyi-R100 (R100 bn) ukulekelela ukufukula umnotho wezwe.
Lezi zigaba eziyisithupha zokufukula umnotho kubalwa kuzo:
Ukuba izwe libe nogesi onamandla nothembekile nokufanele kwenzeke kule minyaka emibili.
Ukusungulwa kwamathuba emisebenzi ayi-800 000 ngokushesha ukuze kuliwe nendlala yokungasebenzi kwabantu.
Ukuba kusetshenziswe imali esigidintathu ukuthuthukisa ingqalasizinda kule minyaka emine ezayo
Ukwehliswa kwamanani amadata ukuze bonke abantu nabangasebenzi bakwazi ukuwathenga.
Akuliwe nokwehla kwezinga le mikhiqizo yakuleli kuphinde kugqugquzelwe izimboni ezigxile empahleni yakuleli eyiswa kwamanye amazwe.
Akukhuliswe imikhakha yezokuvakasha okuyiyo ebonakale ishayeke kakhulu ngenxa yokhuvethe
Phezu kwalokhu kodwa abahlaziyi njengoba beshilo ngenhla abayiboni kahle yonke lento akhuluma ngayo uMengameli ngoba bethi ayinaso isisekelo.
Ngisho nongoti bezomnotho nabo banombono ocishe ufane nowabahlaziyi bezepolitiki njengoba bethi kubukeka sengathi uRamaphosa konke akushilo bekubonakala kuyingcindezi yangaphakathi enhlanganweni nakumadlelandawonye, nokukhanda isithombe sengathi likhona ithemba yize bazi kahle ukuthi imali ayikho. “Sizobhekana nengwadla yokunqamuka kukagesi iminyaka emibili. Kumanje kumile kodwa nabo uyabona ukuthi kabazi ukuthi kume kanjani nokuthi uzophinde unqamuke nini. Iqiniso ukuthi umnotho ngeke uze ukhule uma i-Eskom isehluleka ukulungisa ingqalasizinda nokugwema ukunqamuka kukagesi. Ngaphandle kwalokho kuyinto engaqondakali ukuthi le misebenzi engaka ayibalayo uMengameli uzoyikhanda kanjani ngoba alukho uhlelo olucacile nalubekile olukhombisa ukuthi imisebenzi izovelaphi,” kusho umhlaziyi uRalph Mathekga.
Uqhube wathi nokho okubonakala kubuyisa ithemba ukuthi uMengameli unakho ukuyizonda inkohlakalo kodwa lokho akuphelele uma abantu abathintekayo bengaboshwa.
Ungoti wezomnotho, uMnu uMike Schuster, uthe ngokwakhe ukubona iphupho nje leli elishiwo uMengameli ngamathuba emisebenzi.
“Ngokwenkulumo yakhe ngibone ezisholo izifiso zakhe kodwa angenazo izinhlelo zokuthi uzozifeza kanjani. Kumanje ukhuluma ngamathuba emisebenzi abantu abacela esigidini ekubeni kunezinye izigidi ezingasebenzi ngabe zona kuzokwenzakalani ngazo. Akugcini lapho okunye okukhinyabeza umnotho inkohlakalo ngakho uma kungabonakala kuboshwa abantu abanamagama nabaziwayo ngezinsolo zenkohlakalo lokho kungasiza ekutheni izimboni ezizokwazi ukudala imisebenzi kuleli zizinze kanye nabatshalizimali. Mayelana nengqalasizinda kunzima ngoba ukuthuthukiswa kwayo kukhinyabezwa yiyo inkohlakalo lapho othola izimali sezidliwe kodwa umsebenzi ungenziwanga,” kuchaza uSchuster.
Ngisho uSolwazi uBonke Dumisa ongungoti kwezomnotho uhambe emazwini kaSchuster.
Uthe le nkulumo yinhlalayenzeka kumbe izinto ahlala ezisho njengoba naye uMengameli azi kahle ukuthi kakukho angakwenza ngoba imali ayikho.
“Yingakho noNgqongqoshe Wezezimali uMnu uTito Mboweni eyihlehlisile inkulumo abezoyenza ngomhla zingama-21 iMedium Term Budgetary Policy Statement ngoba ebengenalutho, ” kusho uDumisa.
Uthe ngeke elakuleli lizifanise ne-USA esebenzisa izigintathu uma yenza izinhlelo zokuzitakula ezinkingeni zezezimali ebhekana nazo ngoba yona isebenzisa idola elisetshenziswa kakhulu uma kukhokhwa izinto eziqondene nezwe.
“Yize nayo iphila ngesikweletu i-USA kodwa noma kungenzekani idola lihlala liqinile kalifani nerandi elihlale lilahlekelwa amandla njalo okusho ukuthi asikwazi ukusebenzisa imali esingenayo,” usho kanje.
Uthe okubi ukuthi elakuleli lisebenzisa imali yesikweleti kube kungacaci kahle ukuthi lizokwazi yini ukuyikhokha leyo mali nokuthi uma behlela ukuzitakula kule nkinga yomnotho abakuyo kabavezi ukuthi kuzokwenziwani ukuze kukhandwe lawo mathuba emisebenzi emisha.
Uqhube wathi okunye kuthi abazi ukuthi yini engenziwa ukunyusa izinga lezobuchwepheshe ukuze kubekhona umfutho omkhulu wokubuyisa umnotho kufane nangaphambilini.
Uthe ngale kwalokho elakuleli livalwe kwama nsi umnotho ngesikhathi beselivele lixhugiswa ukwehliselwa esigabeni esingezansi kanti ukube bekuwu kwehliswa kodwa ngabe kungcono.
Uthi okokhuvethe kwenzeka nje iMoodeys isishilo ukuthi elakuleli lidlala ngegeja kuziliwe ngoba imali eliyibolekayo ingaphezulu kwamazinga okuthi ingakwazi ukuyikhokha leyo mali ngokukhululeka.
“Kubi ngempela ngoba ukhuvethe luphinde lwasishaya ngokuthi kuthathwe izimali ezithile zasetshenziswa kwezinye izindawo ngoba kuzanywa ukuvikela impilo yabantu” kusho uDumisa.
URamaphosa uqinise idolo izakhamuzi wathi amaqhinga akhe okukhulisa umnotho azogxila kakhulu kwezezimboni, ezobuchwepheshe, izinguquko azozenza ukufukula umnotho wezwe nokulwa nenkohlakalo.
Uthe zonke lezi zinhlelo zakhe zilawulwa isisekelo sikasomqulu iNational Development Plan 2030, abayibhunge kabanzi ngesikhathi kuvulwa iPhalamende Lesithupha. URamaphosa uphinde wamemezela ukuthi wengeze izinyanga ezintathu zokuthola imali yokungasebenzi engama-R350 okuwuhlelo lokulwa nendlala kulabo abangasebenzi.